Marka ay timaado dhisida ukun buul buul mustaqbalka, hantida wali waxaa loo arkaa mid ka mid ah maalgashiga muddada-dheer ee ugu ammaansan.
Haddii aadan suulkaaga wali kudaadin maal-gashiga hantida, waxaa laga yaabaa inaad ka fekerayso sida loo bilaabayo shaki kuma jiro inay noqon karto xoogaa hawl cabsi leh, laakiin ma ahan inay noqoto!
Waxaa jira xeelado dhowr ah oo aad la socon karto waxa aad ku dambeysana aad raadineyso runtii waxay kuxirantahay waxaad raadineyso.
In kasta oo maalgashadayaasha qaar laga yaabo inay raadinayaan inay iibsadaan guri isla markaana ay si toos ah u kireystaan ​​iyagoo doonaya inay bilaabaan inay kasbadaan dakhli kiro oo joogto ah, kuwa kale ayaa laga yaabaa inay doortaan inay ku noolaadaan guriga inta ay dayactirayaan, iyagoo doonaya inay ku iibiyaan muddada-gaaban si aad uhesho faa iido dhowr ah.
Nooc kastoo maalgashi ah oo aad doorato, ha ahaado mid dheer ama mid gaaban, maalgashiga lebenka iyo madaafiicda waxay noqon kartaa hab fiican oo lagu abuuro maal. Waa kuwan dhawr waxyaalood oo laga fiirsado ka hor inta aanad u quusin maalgashiga hantida.
Waa lagama maarmaan in si buuxda loo fahmo socodkaaga lacagta. Waa fikrad fiican inaad kala hadashid dillaalka amaahda guryaha ku saabsan oggolaanshaha hore ee amaahdaada maalgashiga si aad u ogaato inta aad awoodo inaad amaahato ka hor intaadan bilaabin raadinta hantidaada.
Haddii aad qorsheyneyso cusbooneysiin, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad sabab ka dhigto inta aad diyaar u noqon laheyd inaad ku bixiso sameynta guri, oo ay ku jiraan keyd haddii kharashyada ay qarxi lahaayeen.
Ha dhayalsan kharashyada socda
Hubso in miisaaniyaddaadu u saamaxayso qiimayaasha, caymiska iyo dayactirka guud iyo dayactirka.
Si fiican u baar aaggaaga
Markaad heleyso guri kugu habboon, hubi inaad haysato dhammaan xaqiiqooyinka iyo tirooyinka loo baahan yahay si go’aan caqli gal ah loo gaaro. Tan waxaa ku jira tirakoobka dadka deegaanka, ma jiraan inta badan kireysteyaal? Kuwa guryaha iibsada marka hore ma xiiseynayaan aaggan? Waxay kuxirantahay istiraatiijiyaddaada maalgashi, waxaad ubaahantahay inaad hubiso in hantidaadu ay sifiican ufiicnaan doonto si ay usoo jiidato kiraystayaasha ama iibsadayaasha guryaha.
Noqo mid macquul ah oo ku saabsan yoolalkaaga maalgashi
Ma waxaad dooneysaa kobcin raasamaal mise waxaad dooneysaa inaad guriga ku haysato muddo dheer? Inta lagu jiro suuq xoog leh
Muddo, way fududaan doontaa in la dayactiro guryaha oo loo iibiyo faa’iido. Laakiin xilliyada dhaqaale ee gaabiska ah, sugitaanka iyo aragtida habka ayaa laga yaabaa in loo baahdo intaad sugeysid si aad u gaarto kobaca raasamaalka halka aad kireysaneysid gurigaaga inta ka horeysa.
Ka fikir DYI haddii aad dayactireyso
Markay tahay waxyaabaha adag sida tuubada iyo korontada waxaa lagama maarmaan ah in xirfadlayaashu ku lug yeeshaan. Laakiin, bixinta ganacsatada si ay u dayactiraan gurigaaga oo dhan waxay noqon kartaa mid qaali ah. Haddii aad adigu sameyn karto dhinacyo gaar ah, waad keydin doontaa lacag oo waxaad kordhin doontaa heerka faa’iidadaada. Tusaalooyinka qaarkood meelaha aad si ammaan ah gacmaha uga wasakheyn karto waxaa ka mid ah:
• Ka qaadista golaha wasiirada ee hore
• Soo bixida dhirta hore iyo sariiraha beerta
• Beerista geedo iyo dhir cusub
• sudhan daahyada cusub iyo daahyada
• Beddelaadda duubkii duugga ahaa iyo wixii la qasay
• Bedelida gacmo-dhaqameedyadii hore
• Goynta foornada ama rooga ridaya
Raadi hawl ka badan qaabka
Guri kiro ah waa inuu ahaadaa mid shaqeynaya, nadiif ah oo nadiif ah. Guri casri ah, oo dhammaaday ayaa laga yaabaa inuusan ahayn waxaad raadineysay, gaar ahaan haddii aad qorsheyneyso inaad cusbooneysiiso. Guri u baahan in fiiro gaar ah loo yeesho waddo weyn, aagga aad rabto waxaad lahaan doontaa rajo koboc horumarineed oo muddo-gaaban ah marka la hagaajiyo, ka dib guri cusub, guri dhammaaday ayaa arki doona muddo gaaban.
Haddii aad raadineyso wax diyaar u ah inaad isla markiiba kireysato, guriga la dhammeeyey wuxuu noqon karaa istiraatiijiyad ka wanaagsan, gaar ahaan haddii ay diyaar u tahay kiraystayaasha isla markiiba.
Isticmaal madaxaaga, ha u isticmaalin qalbigaaga, markaad dooranaysid guri
Xusuusnow inaad raadineyso guri ama rafcaan ka qaadan kara dad badan oo wax iibsada ama kireystayaal ah, oo aan ahayn hanti aad adigu jeceshahay.
Marka, si macquul ah uga fikir, oo raadi waxyaabaha lagama maarmaanka u ah ee soo jiidanaaya tirada dadka ugu ballaaran. Waa kuwan qaababka qaarkood ee hoos looga fiirsado.
• Keyd badan
• Qaboojiyaha iyo / ama marawaxadaha saqafka
• Dayrka dayactirka yar iyo beerta
• Iftiin iyo iftiin gudaha ah
• Bannaan furan
Si taxaddar leh uga fikir ka hor inta aanad si xun u diyaarin
Haddii dakhliga kirada ee aad hesho uusan si buuxda u daboolin bixinta amaahda iyo kharashaadkaaga, gurigaaga si xun ayaa loo waafajinayaa.
Tani waxay yeelan kartaa faa’iidooyin canshuur laakiin waxay sidoo kale u horseedi doontaa culeys dhaqaale haddii aadan haysan socodka lacagta si aad u daboosho dib u bixinta amaahda, sicirka ama khidmadaha shirkadaha. Istaraatiijiyaddan waxaa inta badan doorta maal-gashadayaasha doonaya kobcinta raasamaalka muddada-dheer ee maalgashigooda, iyo kharashka faa’iidooyinka muddada-gaaban.
Waxaa fiican inaad raadsato talobixin maaliyadeed oo madaxbannaan ka hor intaadan dooran istaraatiijiyad maalgashi.
Wali lacag bixinta gurigaaga?
Muhiim maahan (ama inta badan macquul ah) in guri lagaa helo gebi ahaanba la bixiyo kahor iibsiga hantida maalgashiga. Maxay muhiim tahay in la helo lacag fiican oo kaash ah oo la maalgashado, ama loo isticmaalo deebaaji ahaan, in laga caawiyo dayactirka ama in la daboolo wixii kharash ah ee lama filaan ah. Waxa kale oo laga yaabaa inaad ku haysato sinaan kugu filan gurigaaga dhexdiisa si aad uga caawiso deebaajiga loo baahan yahay in lagu maalgeliyo guri, marka kala hadal dallaal deymaha ah wixii ku saabsan xulashooyinkaaga.
Ku dadaal dadaalkaaga
Sida prope kasta
Gurigaagu diyaar ma u yahay iib? →